[समाचार पत्र] ylliX: समाचार र अपडेट [मार्च २१, २०१७] – Advertica Blog
हामीसंग तपाईंको लागि केहि रोमाञ्चक समाचार र अपडेट छ:
PopUnder, TabUp र TabUnder ad tags हरु अब उपलब्ध छन्!
तपाईंले माग गरे अनुसार – publishers, हामीले ylliX मा PopUnder, TabUp र TabUnder ad tags थपेका छौँ। त्यसैले तपाईंले अब देखि “pop” ad tags: PopUp, PopUnder, TabUp र TabUnder गरेर ४ वटा बाट चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
सबै “pop” ad tags ले डेस्कटप र मोबाइल उपकरणहरू दुवैमा काम गर्छन।
यसबाहेक, सबै PopUp, PopUnder, TabUp र TabUnder ad tags सबै प्रमुख सञ्चालन प्रणाली र वेबसाइट ब्राउजरहरुमा राम्रो उपयुक्तताका लागि अनुकूलित गरिएका छन्।
Mobile Redirect Ad Tag ले पनि अब डेस्कटप ट्राफिक स्वीकार गर्नेछ!
आज देखि सुरु, तपाईंले Mobile Redirect Ad Tag लाई डेस्कटप स्रोतहरू (कम्प्युटर, ल्याप्टप, आदि) पनि प्रयोग गरेका आगंतुकों मोनेटाइजेशनका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्न, Mobile Redirect Ad Tag उत्पन्न हुँदा , केवल “डेस्कटप पर्यटकहरू पुनःनिर्देशित गर्ने: हो” चयन गर्नुहोस्।
पुन: निर्देशित डेस्कटप प्रयोगकर्ता देखि Ad अवलोकनहरू “Direct Link” ad format रूपमा रिपोर्टिंग प्रणालीमा देखा पर्ने।
“Pop” र Redirect Ad tags लागि अनुकूलन आवृत्ति कैपिंग।
अब तपाईंले विस्तारित आवृत्ति कैपिंग उपकरण आगंतुकहरुलाई देखाइएको PopUp/ PopUnder/ TabUp/ TabUnder विन्डोहरुको संख्या सीमित गर्न वा / र ylliX Redirect Ad Tag प्रयोग गर्ने पुनर्निर्देशन फ्रिक्वेन्सी सीमित गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
सल्लाह: सल्लाह: तपाईंले हाम्रो पुनःनिर्देशित गर्ने ad tag yet प्रयोग गर्नुभएको छैन? यसलाई एक 1/24 आवृत्ति सेटिङमा प्रयास गर्नुहोस्। हामीले हरेक आगन्तुकलाई एक दिनमा मात्र एक पटक पुनःर्निर्देशित गर्नेछौँ, ताकि यसले गर्दा तपाईंका आगंतुकहरुमा बाधा आउने छैन र तपाईंसंग हाम्रो Redirect ads मा भएको उत्कृष्ट eCPMs हेर्न मौका हुनेछ !
नयाँ JS ad tags छिटो भएको र iFrame ad tags भन्दा ads सेवा अझ बढी दिने।
सबै iFrame ad tags अहिले सक्रिय रहन्छन् तर हामी जोडदारका साथ publishers लाई सकेसम्म छिटो पुरानो iFrame ad tags लाई नयाँ JS ad tags संग प्रतिस्थापन गर्न सल्लाह दिन्छौँ।
अनुकूलित, छिटो र अधिक विस्तृत रिपोर्ट!
हामी तपाईँलाई नयाँ, सुधार र अनुकूलित रिपोर्टिङ सिस्टम परिचय गराउन उत्साहित छौँ। यो अब प्रयोग गर्न छिटो र सजिलो छ।
यसबाहेक, हामीले उपकरण, सञ्चालन प्रणाली र ब्राउजर तथ्याङ्क हाम्रो रिपोर्ट प्रणालीमा थपेका छौँ।
सुधारिएको ad लक्ष, हजारौं नयाँ अभियानहरु !
हामीले विज्ञापन लक्षित सिस्टम अनुकूलित गरेका छौँ र हजारौं CPA/CPI/CPS अभियानहरु हाम्रो सिस्टममा राखेका छौँ जसले गर्दा eCPM ज्यादातर publishers को लागि उच्च हुन जान्छ।
चाँडै हामीले हाम्रा प्रिमियम publishers को लागि अझ धेरै CPM र CPC ads थप्न जाँदै छौँ ।
Google’s “Deceptive Site Ahead” मुद्दा समाधान गरियो!
हामीले सफलतापूर्वक ब्यानरहरूको मामिला समाधान गरेका छौँ जुन अक्सर Google द्वारा “deceptive” चिन्ह लगाइएका थिए र येसले गर्दा publisher’s का वेबसाइट पनि “deceptive” चिन्ह लगाइएका थिए। अहिले हाम्रो सबै ब्यानरहरू “Google-friendly” छन्।
हामीले विश्वव्यापी ad लोड गर्न गति दिन CDN को प्रयोग सुरु गरेका छौँ।
हाम्रो सञ्जालको ad लोड अब २.५ गुनाले छिटो भएको छ!
अनुकूलित ads लोड गर्न Safari प्रयोगकर्ताका लागि
एक १००% भरण-दर नजिक!
हाम्रो publishers हरुलाई हामी सबैले विश्वव्यापी ad प्रकारमा एक १००% भरण-दर प्रदान गर्न कठिन काम गरिरहेका छौं।